बलिउडका यी चर्चित कलाकार जो आफ्नो करियरबाट हार खाएपछि आत्माहत्या रोज्न बाध्य भएका थिए – Medianp
बलिउडका यी चर्चित कलाकार जो आफ्नो करियरबाट हार खाएपछि आत्माहत्या रोज्न बाध्य भएका थिए
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०७५१४:४४0
एजेन्सी,२५ साउन । मानिस बाहिर देख्दा जति खुसी हुन्छन् त्यतिकै भित्री पिडाले जेलिरहेको हुन्छ । संसारमा आफुलाई मानिसले एक्लो भएको महशुस गर्छ तब उसमा आफु जिउँदो रहनु बेकार जस्तै ठान्छ । ताकी संसारबाट सदाका लागि टाढिन चाहन्छ ।
लाग्छ यस्तो सधारण व्यत्तित्व भएका मानिसलाई मात्र यस्तो अविश्वासनिय सोच आउँछ तर कदापी यस्तो नहुँदो रहेछ । चर्चित रुपमा कहलीएका जो कोहीले पनि आउँने गरेको हुन्छ । हेरौँ को को हुन त आफ्नो जविनको आनन्द मृत्युमा भएको ठान्दै आत्माहत्या रोज्ने बलिउडका कलाकार ।
दिपिका पादुकोण : आत्माहत्या रोज्ने पहिलो नम्बरमा पर्ने बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणले एक समयमा आफ्नो जीवन बाट हार खाएपछि आत्माहत्या रोजेकी थिइन् । त्यसै कारण उनी डिप्रेशनको सिकार समेत भएकी थिइन् । त्तिबेला उनले निकै राम्रा फिल्महरु पनि गुमाएकी थिइन् । पछि उनका बाबुले दिएको हौसला र साथले उनले नयाँ जिवन पाएकी छन् ।
इलियाना डिक्रुज : आफ्नो सुन्दरताको कारण निकै चर्चामा रहेकी बलिउड अभिनेत्री इलियाना डिक्रुजाले पनि एक समय जीवनको अन्तिम खुसी मृत्यु सम्झिएकी थिइन् । ताकी उनले फिल्ममा राम्रो सफलता नपाएपछि आत्माहत्या गर्ने निर्णय गरेको एक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा बताएकी छन् ।
आफ्नो करियरको सुरुवातमा राम्रो फिल्म नपाउनु पाएका फिल्मको राम्रो व्यपार नहुनुले उनको मनमा शान्ति भने थिएन् । जसले गर्दा उनी डिप्रेशनमा परेकी थिइन् । आफु डिप्रेसनको सिमार भएपछि उनले आत्माहत्या गर्ने निर्णय गरिसकेकी थिइन् ।
सुरेश रैना : भारतका चर्चित क्रिकेटर सुरेश रैनाले पनि आत्माहत्या नै रोजेका थिए । जबकी उनी अहिले भारतको एक कुशल क्रिकेटर हुन् । होस्टल स्पोर्टमा बस्दे आएका उनी करियरको त्याहाँ हेडबाट पिडित हुन्थे र आफु मर्न चाहन्थे तर उनले पछि डिप्रेशन बाट पन्छिएका छन् ।
ए आर रहमान : आफ्नो कलाको कारण भारतमा निक चर्चा बटुलेका संगितकार ए आर रहमानको क्रियसन बाट निकै चर्चामा रहेका छन् । उनी पनिकुनै बेला आत्माहत्या गर्न चाहन्थे । उनी आफु करियर निर्माणको क्रममा थिए । त्यतिबेला उनको मनमा आत्महत्या गर्ने इच्छा हुन्थ्यो। यो विषय उनले आफ्नो बायोग्राफी ए आर रहमान द स्प्रिट अफ म्युकिजमा उल्लेख गरेका छन्।
नायिका स्वेता खड्काले पति स्व.श्रीकृष्णको चौथो वार्षिकीमा यस्तो भावुक कविता लेखिन्ः ‘किन आउँछ आजको यो दिन’
रिभाल्डोको दावी, ‘नेयमार ढिलो चाँडो रियल मड्रिड गएरै छोड्छन्’
चलचित्र ‘प्रेम दिवस’को पोस्टरमा कस्ता देखिए त रियल जोडी आयुष्मान र प्रियंका ?
९ वर्ष पहिले तीन बच्चाको पीतासँग विवाह गरेकी यी अभिनेत्री आहिले पाँचौ ब्वाइफ्रेण्डसँग डेट गर्दै !
‘क्याप्टेन’ लिएर अनमोल नेपालगन्जमा,देखियो यस्तो क्रेज
नायिका वर्षा राउत र संजोग कोइराला आज विवाह बन्धनमा बाँधिदै